Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya | savanne forum
Waxa uu wakiilku sheegay inay shirka dib u heshiisiinta ee Jabuuti ka dhacaya ay sidoo kale ka qeyb gelayaan Odayaasha beelaha Hawiye oo sida uu sheegay masâ€™uuliyiintooda ay ku sugan yihiin haatan dalka Jabuuti, isagoo xusay in odayaasha Hawiye ay kaalin weyn ku leeyihiin Siyaasadda dalka Soomaaliya.
Sidoo kale waxa uu sheegay in shirka dib u heshiisiinta Soomaalida ee ka dhacaya Jabuuti ay ka qeyb galayaan xubno ka mid ah qurbo-joogta Soomaalida oo uu xusay in ay kaalin muhim ah ku leeyihiin arrimaha siyaasadda Soomaaliya, kuwaas oo sida uu yidhi haatanba qaarkood ku sugan dalka Jabuuti.
Waxa uu Wakiilku sheegay inuu xidhiidho la sameeyay kooxaha mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya, gaar ahaan Isbaheysiga saldhigoodu yahay magaalada Casmara ee dalka Eretreya uuna ka dhaadhiciyay sidii ay shirkaasi ugu soo qeyb gali lahaayeen.
Waxa kale oo uu sheegay in uu kulan la yeeshay Raysal wasaaraha dowladda Itoobiya Meles Zenawi isla markaana ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya iyo sidii loo dhameyn lahaa dagaalada ciidamadiisa iyo xoogaga mucaaradka ku dhex maraya gudaha dalka Soomaaliya, taasina uu Meles ballanqaaday inuu gacan ka geysanayo.
Hadalka ka soo yeedhay Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Ahmedou Ould Abdallah ayaa ku soo beegmaya xilli kooxaha mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya ay mugdi geliyeen ka qeybka kulankaas,